Banyere Anyị - Shanghai Huanna Industry & Trade Co., Ltd.
Shanghai Huanna Industry & Trade Co., Ltd a raara nye Eco na ndụ ndụ dị mma. N’afọ 2017, anyị hiwere akara ọhụrụ anyị chọrọ ka anyị jiri mara ụwa anyị aha ya bụ NATUREPOLY. Lụ ọgụ megide mmetọ plastik dị mkpa karịa mgbe ọ bụla, NATUREPOLY kwenyere na obere nhọrọ nwere ike ime nnukwu ọdịiche na ahụike anyị na ụwa anyị. Onye ọ bụla kwesịrị ime òkè ha na iwepu plastik na ndụ ha kwa ụbọchị. Ihe eji emebi emebi ma na-adigide, dị ka PLA (polyacid) na okpete, na-enyere anyị aka ịbịaru nso na ndụ enweghị plastik.
Anyị ụlọ ọrụ bụ a elu-tech enterprise na a ika NATUREPOLY, nke specializes na nnyocha, mmepụta na ngwa nke n'ụzọ zuru ezu compostable ngwaahịa na ọgaranya ahụmahụ nke ihe karịrị afọ 13. Huanna nwere ụlọ mmepụta ihe abụọ dị na Huzhou na Shenzhen. Ngwaahịa anyị niile bụ nke ihe eji emebi ihe, nke na-eme ka o doo anya na ha bụ 100% compostable, ma gafere EN13432, ASTM D6400, Australia As5810, EU na asambodo nnwale ikike ikike mba ọzọ. Na echiche nke "Ọnọdụ ka mma, ndụ ka mma", anyị na-enye ihe 100% ngwaahịa a na-emebi emebi, yana ụdị ndụ dị mma.
Onye na - eweta ihe ngwọta agbanwe agbanwe kemgbe afọ iri na atọ
Ihe a na-ahụkarị na ya
Ihe eji egbu egbu
Ihe eji emebi emebi iko
Akpa ere akpa
Ihe eji emebi ihe onwunwe
ANY AD B ADARA
1.Over 13 afọ nke n'ichepụta ahụmahụ
Companylọ ọrụ anyị na-emepe emepe na -emepụta ngwaahịa nwere ike iwepu ihe karịrị afọ 13. Anyị na-ebupụ mbadamba mbibi, nke a na-emepụta ihe na nke a na-emegharị emegharị, nke a na-emezi. R&D anyị nwere ike ịmepụta ihe karịrị ihe ọhụrụ 10 kwa afọ na 80% nke ngwaahịa anyị bụ maka mbupụ.
2. Ndị otu ụlọ ọrụ nyocha nke mba ụwa gosipụtara
Maka NATUREPOLY, ịchụso agwa abụrụla ihe kacha mkpa. E nyewo ngwaahịa anyị ikike asambodo mba ụwa dịka EU EN13432, ASTM D6400, Australia AS5810, nke gosipụtara na NATUREPOLY bụ 100% biodegradable na compostable.
3.Professional ahịa ọrụ na ngwa ngwa nnyefe
Site na ntọala 2 na China, anyị nwere ike ịzaghachi ngwa ahịa onye ahịa. Ndị ọkachamara anyị nwere ọmarịcha ọrụ na ịnụ ọkụ n'obi ịza ajụjụ gị niile. Anyị na-enye azịza na nchekwa nke nchekwa nke ndị ahịa na ebe ọ bụla ha chọrọ n'akụkụ ụwa niile.